ဘုရားသခင်အသံကြားရန် by Daily Hope
သခင်ခရစ်တော်ပြောသော မာသော မြေဆီလွှာ (လူသွားလမ်း) ရှင်လုကာ ၈ တွင်ပါသည်၊ ဘုရားသခင်၏စကားကြားခြင်း ကို လူတစ်ဦး၏ ခံနိုင်ရည်အကြောင်းပြောသည်။ သဘောထားကျဉ်းမြောင်းပြီး၊ စိတ်နှလုံးမာကျောသော၊ လူသွားလမ်း ကျဉ်းလိုလူ သင်သိတဲ့သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရှိပါသလား။? သင်ဘုရားသခင်အကြောင်းဘာဘဲပြောပြော၊ ထည့်သွင်းမစဉ်း စားဘဲ သူတို့နားမထောင်ကြပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ကြိုတင်၍ သူတို့စိတ်ကူးအတိုင်းလုပ်ထားကြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
“အချို့သောအစေ့တို့သည် ကျောက်ပေါ်၌ကျသဖြင့် အပင်ပေါက်သောအခါ မြေသြဇာမရှိ သောကြောင့် ညှိုးနွမ်းပျက်စီး ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။” ( လု ၈း၆)
သင်သည် ဘုရားသခင်အတွက် အချိန်မယူလျှင် ဘုရားသခင်၏အသံကြားမည်မဟုတ်ပါ၊ သင်သည်အရှိန်လျော့ချခြင်း၊နှင့် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှ ဘုရားသခင်အသံကိုကြားမည်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အလောတကြီး လုပ်မိလျှင် ဘုရားသခင်၏ အသံကြား မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်ဟာ လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလျှင်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လွဲသွားသည်။ ရထားဖြင်သွားလျှင် အနည်း ငယ် တွေ့ရသည်။ မော်တော်ကားနှင့်သွားလျှင် အနည်းငယ်ပိုတွေ့လာသည်။ နိုင်ငံအတွင်းလမ်းလျောက်သွားလျှင် အသေးစိတ်အချက်အလက်အများကိုတွေ့ရသည်။ အသက်တာတွင် လျင်မြန်စွာသွားပါက ပိုမိုများပြား သောအရေ အတွက်ကို လွဲသွားနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏အသက်တာတွင် အလျင်စလိုလှုပ်ရှားပြီးနေကြသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အချိန်ပို မိနစ်အနည်းငယ် သာ ပေးနိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်မတန်တိုတောင်းသောအချိန်ကိုသာရသည်။ ကျွန်တော်က “ဘုရားသခင် ကျွန်တော် ကိုပြောပါ မြန်မြန်ပြောပါ။” ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်အချိန်ကို ခြိုးခြံချွေတာလျှင် အသက်တာတွင် ပို၍ပို၍ ဘုရားသခင်နှင့်ကင်းကွာလာခြင်းကိုဦးဆောင်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်အနီးသို့မရောက်တော့ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအတွက်အချိန် မပေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်တစ်ဦးချင်း တွေ့တာ လုံလောက် သော အချိန်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဘုရားသခင်သည် အချိန်အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်နှင့်ကင်းကွာလာခြင်းကိုဦးဆောင်နေသည့် လူနေမှုဘ၀ပုံစံက ကျွန်တော်တို့သည် ထာဝစဉ်အလျှင်အမြန် လှုပ်ရှားနေသောကြောင့် သခင်ခရစ်တော်၏ ပုံဥပမာ တွင်ပါသော အပေါ်ယံမျှသာ သို့မဟုတ် ကျောက်မြေဆီလွှာကို ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။
အများသော ဣသရေလနိုင်ငံ တွင် ပါးလွှာသောပေါ်ယံမြေဆီလွှာအောက်မှအမာခံထုန်းကျောက် ကျောက်လွှာရှိသည်။ မြေဆီလွှာသည် သိတ်မနက်ပါ၊ သခင်ခရစ်တော်က ဤမြေပေါ်သို့မျိုးစေ့ကျလျှင်၊ စတင်၍အပင်ပေါက်သည်၊ မကြာမှီမှာ ဘဲ ခြောက်သွေ့ညိုးနွမ်း၍သေသည်၊ ရေငွေ့နှင့်အစိုဓာတ် ချို့တဲ့လိုအပ်သောကြောင့်နှင့် အမြစ်သည်အောက်သို့ဆက်၍ မဆင်းနိုင်ကောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သခင်ခရစ်တော်က ဤတိမ်သောမြေဆီလွှာသည် မလေးနက်သောခံစားမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤစိတ်ဓာတ်ရှိသောသူ သည်၊ ဘုရားသခင်၏စကားကိုနားထောင်သည်၊ စိတ်ခံစားမှုရသည်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့သည် ဒီအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ ဘာမှ မပြုလုပ်ကြပါ။
ပြီးခဲ့သောနှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်က ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပြီးဒါနဲ့ လူဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာတောင်မမှတ်တော့ပါ သူတို့သည် ဟောသောတရားဒေသနာသည်အလွန်ကောင်းကြောင်း သူတို့အတွက်အကျိုးရှိကြောင်း၊ ပြောကြသည်။ ဒါပေမဲ့ လပေါင်းကြာသောလည်း သူတို့၏အသက်တာပြောင်းလဲကြောင်းဘာမှမပြကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် တရားဒေသနာကို နားလည်သဘောမပေါက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းအရာကို ဘယ်လိုသဘောပေါက်နားလည်သလည်း။ ? သင်ဘယ်လို မလေးနက်သောသူမှ နက်ရှိုင်းသောသူ ဖြစ်လာရန်မည်နည်း၊ ယုံကြည်မှုရှိရမည်၊ စီးပွါရေးကျဆုံးမှု (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စိတ်မကျမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ များ တိုက်ခိုက်သည်။?
၁၊ နေ့စဉ် အေးဆေးသောအချိန် ။ သင်သည်ဘုရားသခင်နှင့် တစ်ဦးချင်းတွေ့၍ ကျမ်းစာဖတ်ရန်၊ ဆုတောင်း၍ ဂျာနယ် တွင် သင်ကြားထားသောအရာများရေးထားပါရန်။
၂။ အပတ်စဉ်အဖွဲ့ငယ်။ သင်သည်အခြား ယုံကြည်သူများနှင့်တွေ့ရန်အချိန်လိုသည်၊။ သင်နှင့်နီးစပ်သောသူများနှင့်တွေ့ ပြီး၊ သူတို့၏အမြင်ရှုထောင့်များကိုတင်ပြနိုင်သည်။ သူတို့သည် အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနှင့် နားလည်အောင်တာဝန်ယူ မည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအခြေအနေ တိုးတက် နက်နဲလာရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဘုရားသခင်အသံကြားရန် နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ ဆူးပင် သုံးမျိုး
အချို့သောအစေ့ တို့သည် ဆူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့် ဆူးပင် တို့သည် အတူပေါက်၍ ညှင်းဆဲကြ၏။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘုရားစကားကို သတိမထားမိပဲ တသွားတည်းသွား၊ တစားတည်းစားပြီး အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှုပ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အတားအဆီးကြီးကို တွေ့ကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တွေးပူနေတာတွေ၊ တွေးကြောက်နေတာတွေ၊စဉ်းစားနေတာတွေ၊ အစီအစဉ်ဆွဲနေတာတွေ နဲ့သာ ပြည့်နှက်နေရင် ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားသံကို သတိထားမိ၊ကြားမိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တီဗွီကို တချိန်လုံးကြည့်နေရင်၊ ရေဒီယို တချိန်လုံး နားထောင်နေရင်လဲပဲ အတူတူပါပဲ။ ဘုရားရဲ့ အသံကို မကြားနိုင်ကြပါဘူး။ ဖုန်းနဲ့ နား မခွာပဲ အမြဲတမ်း ဖုန်းပြောနေရင်လဲ ဘုရားက ကျွန်တော်တို့ကို ခေါ်တဲ့အခါမှာ လိုင်းမအားလို့ ခေါ်လို့မရပါဘူး။
ရှင်လုကာ အခန်းကြီး ၈ မှာ သခင် ခရစ်တော် ပြောတဲ့ ဆူးပင်တွေဆိုတာ့ ဒီလိုအာရုံများနေမှုတွေကို ညွှန်းဆို ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ခေါင်းစဉ်ကျမ်းပိုဒ်လေးက ”ဆူးပင် တို့သည် အတူပေါက်၍ ညှင်းဆဲကြ၏။” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆူးပင်တွေရဲ့ ညှင်းဆဲခြင်းခံရတာဟာ မြေဆီသြဇာ မကောင်းလို့ အပင် မပေါက်နိုင်တဲ့ မျိုးစေ့တွေထက် အနည်းငယ်တော့ သာပါတယ်။ သူကတော့ အပင်ပေါက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆူးပင်တွေက အပြိုင်အဆိုင် ပိတ်ဆို့ နှောက်ယှက်တားဆီးနေတာကြောင့် အသီးကိုတော့ မသီးနိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ လူအတော်များများဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားကို ကြားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘ၀ကို လျှောက်လှမ်းရင်းနဲ့ ပူပင်မှုတွေ၊ ငွေကြေးဓနပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေ၊ ကာမဂုဏ်ပျော်ပါးလိုမှုတွေနဲ့သာ မွန်းကြပ်လာတဲ့အတွက် ၀ိညာဉ်ရင့်ကျက်မှုကို ရသင့်သလောက် မရပဲ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘုရားစကားကို သတိမပြုနိုင်ပဲ သွားလာသောက်စားပျော်ပါးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အတားအဆီးကြီးက ရှိဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အလုပ်များများလုပ်ခြင်းနဲ့ အကျိုးရလာဒ်ရှိမှု ဆိုတာကို ခွဲခွဲခြားခြား မသိကြပါဘူး။ အလုပ်များများလုပ်ရင် အကျိုးရလာဒ်များများရမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုထင်ပြီး လုပ်ပြီးရင်းလုပ်နေ၊သွားပြီးရင်းသွားနေ၊ စားပြီးရင်း စားနေ တာတွေသာရှိပြီး ၀ိညာဉ်အားဖြင့်တော့ ကြီးထွားပြီးရင်း ကြီးထွားရင်း မရှိဘူးဆိုရင် အလုပ်ရှုပ်တာသာ အဖတ်တင်ပါတယ်။ အကျိုးရလာဒ်အားဖြင့်တော့ ဘာမှရကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဟာ မအားမလပ်နိုင်ပဲ အာရုံတွေများနေခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ ဆူးပင်တွေ ပေါက်နေတာလို့ ခရစ်တော်က ဆိုပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ စကားကို မကြားနိုင်လောက်အောင် နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ ဆူးပင် သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
၁။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း - ဂရိလိုတော့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းကို merinma လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အဖက်ဖက်ကနေ ဆွဲနေခြင်းပါ။ အဖက်ဖက်ကနေ ဆွဲနေတော့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြရတော့ တာပေါ့။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေပြီဆိုရင် ဘုရားစကားကို မကြားနိုင်တော့ပါဘူး။
၂။ ငွေကြေးချမ်းသာ ဖူလုံလိုခြင်း - စားဝတ်နေရေး ပြည်စုံ လုံလောက်ဖို့၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပေးဆပ်နိုင်ဖို့၊ အကြွေးမတင်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှား အလုပ်များနေရင်လည်း ဘုရားစကားကို မကြားနိုင်ကြပါဘူး။
၃။ အလွန်အမင်း ပျော်ပါးလိုခြင်း - ဘုရားဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ပျော်ရွှင်စေချင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုဟာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျော်ရွှင်မှု နောက်သာ အလွန်အမင်း လိုက်နေလို့ရှိရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေထဲမှာပဲ နစ်မြုပ်နေပြီး ဘုရားနောက်ကို လိုက်ဖို့တော့ အချိန်မရှိပဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဆူးပင်တွေဟာ အထူးတလည် ဘာမှ မလုပ်လည်းပဲ သူ့ဖာသာ ကြီးထွားတတ်ကြပါတယ်။ ဆူးပင်တွေ ရှိနေခြင်းဟာ ဂရုမစိုက်ပဲ လျစ်လျူရှု ထားတဲ့ လက္ခဏာ တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားနဲ့ အချိန်ပေးဖို့ကို လျစ်လျူရှုထားရင်တော့ ဒီဆူးပင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀မှာ နေရာယူ ကြီးထွားစ ပြုလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆူးပင်တွေရဲ့ လောင်းရိပ်အောက် မရောက်ချင်ရင်တော့၊ စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းနေရာယူနေတဲ့ အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ အာရုံထွေပြားမှုတွေကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓမ္မရာဇင်ဝင် တတိယစာစောင် ၁၉-၁၂ မှာ ”ဘုရားသခင်သည် ဧလိယကို စကားပြောရာ၌ လေလှုပ်ခြင်းထဲတွင်၊ မြေကြီးလှုပ်ခြင်းထဲတွင်၊ မီးထဲတွင် ရှိတော်မမူ။ ဧလိယအား တိုးညှင်းစွာ ပြောတော်မူ၏” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘုရားသခင် တိုးညှင်းစွာ ပြောတဲ့ စကားကို ကျွန်တော်တို့ ကြားချင်ရင် ငြိမ်သက်စွာနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ အသံတော်ကို ကြားနိုင်ဖို့အတွက် မိတ်ဆွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲ ဖန်တီးထားပါတယ်။
ဘုရားသခင်သည် တကြိမ်မိန့်မြွက်တော်မူ၏၊၊ လူမရိပ်မိလျှင် နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် မိန်မြွက် တော်မူ၏၊၊ ယောဘ ၃၃း၁၄
ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ အသံတော်ကို ကြားနိုင်ဖို့အတွက် မိတ်ဆွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲ ဖန်တီးထားပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရဲ့ လမ်းပြမှုကို ခံယူနိုင်ဖို့ " လက်ခံနိုင်တဲ့ကရိယာ" တခု မိတ်ဆွေဆီမှာ ရှိပါတယ်။
ဘုရားကဘယ်လို လမ်းကြောင်းမျိုးကို သုံးပါသလဲ။ အဓိကသုံးတဲ့ လမ်းကြောင်းကတော့ ဘုရားက ကျမ်းစာကနေ စကားပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျမ်းစာကို နေ့တိုင်း ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘုရားကို ချစ်ကြောက်ရိုသေတဲ့ ကျမ်းစာသင် ဆရာများကနေတဆင့်လည်း ဘုရားက စကားပြောတတ်ပါတယ်။ အသင်းတော်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျမ်းစာသင်တန်း တခုခုမှာ ဖြစ်ဖြစ် သင်ကြားတဲ့ ဆရာက ကိုယ့်ကို တိုက်ရိုက် ပြောနေတယ်လို့ ခံစားမိဘူးပါသလား။ အဲဒီအချိန်လေးမှာ ဘုရားက ကိုယ့်ကို တိုက်ရိုက်စကား ပြောနေပါတယ်။
အခြားသော ယုံကြည်သူများကနေ တဆင့်လည်း ဘုရားက စကားပြောတတ်ပါသေးတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ အထဲကနေတောင်မှ သူပြောတတ်ပါသေးတယ်။ မိတ်ဆွေဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ အမြဲသွားလာတတ်ပြီး၊ သူရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အမြဲ လေ့လာနေမယ်ဆိုရင်၊ တခါတရံမှာ ဘုရားက မိတ်ဆွေကို သုံးပြီး အခြားသူတွေကို သူပြောချင်စေချင်တဲ့အရာတွေကို ပြောခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေအတွေ့အကြုံများနဲ့ နာကျင်ဆင်းရဲမှုတွေကနေတဆင့်လည်း ဘုရားသခင် စကားပြောတတ်ပါသေးတယ်။ ဘုရားဟာ တချိန်လုံး စကားပြောနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားစကားကိုသာ နားထောင်ပါ။ သူက မိတ်ဆွေကို လမ်းမှန်ဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘုရားသခင်၏ အသံကြားရန် သင်ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါ 12/3
ရှင်လုကာ ၈း၁၅
ဘုရားသခင်သည် သူခိုင်းသည့် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားသူများကို စကားပြောပါသည်။ ဘုရားသခင် ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမည်ကို ပြောကြားပြီးလျှင် ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ လုပ်မည်ဟု ပြောသူများကို စကားမပြောပါ။ သင်ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် တတ်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ စကားသံကို ကြားရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ရယူ လိုချင်သော စိတ်နှလုံးသည် ကောင်းသောမြေဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျွန်တော်တွေ့ရပါသည်။
"ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ် ကိုယ်တော် လုပ်ဆောင်စေ သမျှကို လုပ်ဆောင်ပါလျှင် မည်မျှ ကြောက်ရွံ့ စရာ ဖြစ်ပါစေ။ သာမန်အရာ မဟုတ်ပါစေ၊ ခက်ခဲပါစေ၊ ကျွန်ုပ် လုပ်ဆောင်ပါမည်၊ ကျွနိုပ်သည် အသီးသီးသည့် တိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါမည်" ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ် ပြောပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည် အသီး ဘယ်လို သီးနိုင်မည်နည်း၊ လုကာ ၈း၁၄ တွင် ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဤထက်မက ရှင်လုကာ ၈း၁၅ တွင်လည်း ယေရှုက ကောာင်းသောမြေ၌ ရှိသောသူကား မြောင့်မတ် စင်ကြယ်သော စိတ်နှလုံးနှင့် တရားစကားကို ကြားလျှင် စွဲလမ်းသောသကာ ဖြင့် မြဲမြံစွာ အသီးသီးသော သူကို ဆိုလိုသတည်း။
အသီးသီး ဖို့ရန် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးသော နည်းလမ်းတစ်နည်းသာ ရှိပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်ကြားပေးပါ။ ထိုသို့ သင်ကြားပေးခြင်းသည် ကြီးထွားခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် သင်ကြားခံရသမျှကို သင်ကြားပြီးပြီးချင်း သူ့တစ်ပါးအား တဆင့်ကမ်းကာ သင်ကြားပေးသူသည် အကြီးထွား အမြန်ဆုံးသူ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော ကြားနာရုံ မဟုတ်ပဲ သင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လုပ်ဆောာင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် သူ့တပါးနှင့် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ နိုင်သောသူ ဖြစ်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။
(ရစ်(ခ်) ၀ါရင်၏ နေ့စဉ်မျှော်လင့်ချက် စာစောင်များထဲမှ ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုပါသည်။)
နေ့စဉ်မျှော်လင့်ချက် ၁၀၀ (Rick Warren)
YWAM စတင်ခဲ့သူ Loren Cunningham ၏ ဘုရားစကားကြားခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံ အသံဖြင့်ပြောမည် (ထွက် ၃း၎)၊ တစ်ခါတစ်ရံ အိပ်မက်အားဖြင့်ပြောမည် (မသဲ ၂)။ တစ်ခါတစ်ရံ ရူပါရုံဖြင့်ပြောမည် (ဟေရှာယ ၆း၁၊ ဗာ ၁း၁၂-၁၇)။ သို့သော် ဘုရားသခင်အများဆုံး အသုံးပြုသော နည်းလမ်းမှာ "အတွင်း၌ဖေါ်ပြခြင်း" (The quiet inner voice) ဖြစ်သည်။ (ဟေရှာ ၃၀း၂၀)၊ Ref: Is That Really You, God? ဘာသာပြန် ဆရာဦးဒီအောင်ရီ
မာရှေသွား၍ ကြည့်ရှုကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမြင်တော်မူလျှင်၊ မောရှေ၊ မောရှေဟု ချုံထဲကခေါ်တော်မူ၏။ မောရှေကလည်း၊ အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏။
ထိုသူတို့သွားကြသည်နောက်၊ ယောသပ်သည်အိပ်မက်ကိုမြင်သည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင် တမန်သည်ထင်ရှား၍၊ သင်ထလော့။ မယ်တော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြေး၍၊ တဖန် ငါပြောဆိုသည်တိုင်အောင် ထိုပြည်၌နေလော့။ ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည် သူငယ်တော်ကိုသတ်အံ့သောငှါရှာလိမ့်မည် ဟုဆိုလေ၏။
သြဇိမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သော နှစ်တွင်၊ ထာဝရဘုရားသည် အလွန်မြင့်မြတ်သော ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသည်ကို ငါမြင်၏၊၊ အဝတ်တော်တန်ဆာသည် ဗိမာန်တော်ကိုဖြည့်လေ၏၊၊
ထိုအသံကို ကြားသောအခါ ထူးတော်မူလိမ့်မည်၊၊ ထာဝရဘုရားသည် သင့်အား ဒုက္ခမုန့်ကို ကျွေး၍ ဆင်းရဲခြင်းရေကို တိုက်တော်မူသော်လည်း၊ သင်၏ဆရာတို့သည် နောက်တဖန် ပုန်းရှောင်၍မနေ ရကြ၊၊ ကိုယ်မျက်စိနှင့် ကိုယ်ဆရာတို့ကို မြင်ရလိမ့်မည်၊၊